चीन बोतल लेबल, अनुकूलित बोतल लेबल आपूर्तिकर्ता - क्रिस्टल कोड प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
कस्टम बोतल लेबलहरू तपाईंको तरल उत्पादनलाई बढावा गर्न उत्तम तरिका हो। चाहे तपाईं पानी, वाइन, बियर वा अन्य पेयहरू सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो लेबल सुरक्षात्मक टुक्रा टुक्रा र एक मजबूत चिपकने वाला, पनरोक खत्म संग सुसज्जित छ।
लोकप्रियताको उचाइमा शिल्प बियर र स्थानीय वाइनरीहरू मात्र होइनन्, तर सुन्दर उद्योगमा धेरै व्यवसायी व्यक्तिहरूले यसलाई आफ्नो घर बनाएर लक्जरी सौंदर्य वस्तुहरू सिर्जना गर्न र बिक्रि बढाउन खोजे पनि! निस्सन्देह, तपाइँ कुनै पनि व्यक्तिगत वा व्यावसायिक उत्पादनको लागि बोतलमा राख्नु भएको छ, तपाईले यसलाई अनुकूलन अनुकूल बोतल लेबलको साथ समाप्त गर्नु पर्छ। सौभाग्य देखि, क्रिस्टल कोड तपाईंको सबै बोतलले आवरण गर्न आवश्यक छ। क्रिस्टल कोड तपाईंलाई बोतलहरू कुनै पनि साइज वा आकारको बोतलका लागि तपाईंको बोतल लेबलहरू पूर्णरूपमा अनुकूलित गर्न अनुमति दिन्छ, ताकि तपाईं आफ्नो ठूलो 32oz विकासकर्ता वा तपाईंको साना यात्रा आकार लोशनहरूको लागि लेबल लिन सक्नुहुनेछ। तपाईंको बोतलको सतहको क्षेत्रलाई पूर्णतया प्रयोग गरी लुम्बिनी वरपरको बोतल लेबल छनौट गर्नुहोस्, वा बोतलको अगाडि र पछाडि लेबलहरू अनुकूलन गर्न तपाईंको अद्वितीय डिजाईन र उत्पादन जानकारीलाई अलग पार्ने सुविधा दिनुहोस्।
थप रूपमा, तपाईं बोतलबार उपहारहरू अनुकूलन नामहरू, फोटोहरू वा विशेष अवसरको साथ निजीकृत गर्न सक्नुहुनेछ! यदि तपाईंको अर्को घटना व्यापारिकव वा खेलकुद कार्यक्रममा छ भने, तपाइँको ब्रान्ड विज्ञापन गर्न विज्ञापन अनुकूलन उत्पादनको लागि तपाईंको औसत प्लास्टिकको पानीको बोटहरू खान्नुहोस्। तपाईंको बोतलें लोगो, टाइपोग्राफी, र फोटोहरू पनि अनुकूलित गर्न सकिन्छ! हाम्रो बोतल लेबलहरू जल प्रतिरोधी हुन् र बुलबुला-रहित अनुप्रयोग सुविधा दिन्छ, त्यसैले तिनीहरू सुचारु रूपले पछ्याउनेछन् र गीली अवस्थाहरूमा अचम्म रहनेछन्।
अनुकूलित बोतल लेबल
अनुकूलित बोतल लेबल 7
किन तपाईंको बोतलले लेबल चाहिन्छ
बीयर बोतलहरू - के तपाईं घर ब्रेयर वा ठूलो शराब बनाउने हो भने, तपाईंको बियर बोतल लेबलको कथा बताउँछ। मानिसलाई थाहा छ कि तपाईले तपाईंको बियर बनाउने व्यवसाय, निजीकृत बियर बोतल लेबलहरू सिर्जना गरेर तपाईंको ब्रान्ड प्रतिनिधित्व गर्दछ। हामीसँग बियर बोतल लेबलहरूको वर्गीकरण छ - पारंपरिक रूपमा थप अनन्य विकल्पहरू।
ई-तरल बोतलहरू - कसैले पनि आफ्नै ई-तरल लेबलहरू सिर्जना गर्न सक्छ। तपाईंको भ्रामक अपील लेबलहरू जुन तपाईंको ब्रान्ड प्रतिनिधित्व गर्दछ। स्वाद, अवयव, र बढी जोड दिन तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। अनि ढक्कन नबिर्सनुहोस्। साना कन्टेनरहरूसँग, प्रत्येक लेबलिङ अवसर गणना गर्दछ!
रक्सी बोतलहरू - पूर्ण आकार र मिनी बोतलों अनुकूलन लेबल संग एक मजेदार तरीका हो जश्न मनाउने हो! प्रापकहरूले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न मनपर्छ वा तिनीहरूलाई सम्झनाको रूपमा राख्न चाहानुहुन्छ। विभिन्न बोतल प्रकार र ब्रान्डहरूको लागि सही आकार फेला पार्नुहोस्। तिनीहरू पार्टीको पक्षमा पनि महान् छन्!
पानी बोतलें - तपाईंको अर्को ठूलो कार्यक्रममा तत्काल प्रभाव पार्ने अनुकूल पानी बोतल लेबलहरू सिर्जना गर्नुहोस्। हामी 8, 12 र 16.9 अज्जतमा पानीको बोतल लेबल लिन्छौं। आकार र सामाग्री को एक किस्म। हाम्रो weatherproof सामग्री कोसिस गर्नुहोस्, स्फूर्तिको सामना गर्न र गीला हुँदा घुमाउने क्षमताको लागि लोकप्रिय।
वाइन बोतलहरू - एक दाखरस बोतलमा लेबल रक्सीको रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंको शराब बोतलले लेबललाई ध्यान पुर्याउनु पर्छ, जिज्ञासामा बोल्नु पर्छ र तपाईंको ब्रान्ड परिचय गराउनुपर्दछ। हामी विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरूमा शराब बोतल लेबल प्रदान गर्दछौं, जसरी पनरोक सहित, ठुलो वा प्रशोधन गरिएको व्हाइटका लागि उपयुक्त।
CCWLC100 इलेक्ट्रोलियमाइनन्ट रक्सी बोतल लेबल
CCWLE095 शराब बोतल गर्दन लेबल
CCWLW100 स्वयं चिपकने वाला स्टीकर लेबल रक्सी को बोतल को लागि
CCBL016 बियर लेबल गर्न सक्दछ
CCBLR020 गीला पावर पेपर बियर लेबल
CCBLP020 बियर निजी लेबल
CCBL020 बियर बोतल लेबल
CCHG080 ग्लास बोतल पानी निजी लेबल
सीसीपीपीडब्ल्यू 040 श्रिंकनीय पानी बोतल लेबल
CCPES085 प्लास्टिकको पानी बोतल लेबल अनुकूलित
CCPPT052 निजी लेबल पानीको बोतल